Maraykanka oo sheegay in ciidan Soomaali ah ka dagaalameen gobolka Tigray - Ceelhuur Online
Home > Wararka Dibadda > Maraykanka oo sheegay in ciidan Soomaali ah ka dagaalameen gobolka Tigray
July 2, 2021 admin642
Mareykanka ayaa sheegay in askar ka tirsan ciidanka Soomaaliya ay u dirtay Eritrea ay gudaha u galeen Itoobiya, taas oo ay horay u beenisay xukuumadda Federaalka.
Ilhaan Cumar, oo ka tirsan Aqalka Wakiillada Mareykanka ayaa weydiisay Robert F. Godec, oo ah sii hayaha ku xigeenka xoghayaha Waaxda Arrimaha Afrika ee Mareykanka, waxa ka jira ku lug lahaanshaha la sheegay in ciidamo Soomaali ah ee dagaalka Tigray.
Godec oo su’aashaas ka jawaabayay ayaa yiri “Waxaan ka war qabnaa in ciidamo Soomaali ah ay joogeen Itoobiya, laakiin hadda ma xaqiijin karo inay dagaal ka qeyb qaateen iyo in kale, balse waan xaqiijineynaa arrintaas,” ayuu yiri.
Ilhaan ayaa mar kale weydiisay Godec sababta ay ciidamada Soomaaliya u joogeen Itoobiya, wuxuuna ku jawaabay, “Waxaan rumeys nahay inay ciidamadaas ay yihiin kuwo Soomaaliya ay tababar ugu dirtay Eritrea kadib heshiis dhexmaray labada dowladood.”
Warbixin dhowaan ka soo baxday Hay’adda Xuquuqda Addanaha u qaabilsan Qaramada Midoobey ayaa lagu sheegay in ciidamo ka socday Soomaaliya oo tababar ku qaadanayay saldhig militari oo ku yaalla Eritrea in ay suuragal tahay inay ka qeyb qaateen dagaalka ka socda gobolka Tigray ee waqooyiga Itoobiya.
Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya, Maxamed Xuseen Rooble, ayaa dhawaan guddi u saaray arinta ciidanka tababarka loogu diray Eritrea, kadib markii ay badatay cabashada ay muujinayaan qaar kamid ah waalidiinta raggaas.
Golaha Ammaanka ee Qaramada Miodobay ayaa gelinka dambe ee maanta kulan ka yeelanaya qalalaasaha Tigray, markii ugu horreysay intii uu dagaalku bilowday.
Dowladda Itoobiya ayaa ugu baaqday ciidamada Tigray inay qaataan xabbad-joojinta, iyadoo hay’adaha gargaarka ay la daalaa dhacayaan inay gargaar gaarsiiyaan boqollaal kun oo qof oo ay macluul heysato.
Kooxda TPLF oo hore u xukumi jirtya gobolka Tigray ayaa Insiintii sheegtay inay la wareegtay gacan ku heynta Maqalle oo ah caasimadda gobolkaas kaddib ku dhowaan siddeed bilood oo uu dagaal ka socday.
Dowladda ayaa ku baaqday xabbad-joojin iskeed ah balse TPLF ayaa diiddday. Waxaa jira cadaadis caalami ah oo labada dhinac ugu baaqaya inay xabbad-joojin qaataan.
Dhanka kale buundada dul marta Webiga Tekeze oo u dhow magaalada Shire ayaa la burburiyay, taas oo saameyn ku yeelaneysay in gargaar la geeyo gobolka, sida uu sheegay Guddiga Laanqeyrta Cas.
Shire iyo dhowr magaalo oo ku yaalla Tigray ayaa waxaa haatan xukuma ciidamada Tigray. Ciidamada dowladda taabacsan ee ku sugan gobolka deriska la ah Tigray ee Amhara ayaa maamula dhanka kale ee Webiga Tekeze.
Ma cadda cidda mas’uulka ka ah arrintaas, dowladda iyo TPLF ayaa isku eedeynaya burburinta buundadaas, balse QM ayaa sheegtay in laga yaabo inay burburiyeen ciidamada Amxaarada.
Xogta Dagaalkii Koofurta Gobolka Mudug
Daawo Cadaado: Beesha Gaabane oo ka cabanaya Guddiga Doorashada
MD Farmaajo oo hambalyo u diray shacabka Soomaaliyeed